Nhau - HOSPITAL STANDBY DESISI GENERETA SET
HOSPITAL STANDBY DESISI GENERETA SET
Chipatara chekuchengetedza magetsi jenareta seti uye iyo bhangi backup magetsi inopa izvo zvakafanana zvinodiwa Ose maviri ane hunhu hwekuenderera kwesimba magetsi uye yakanyarara nharaunda. Ivo vane zvinyatso kudikanwa pane iko kugadzikana kwekuita kwedhiziri jenareta seti, nguva yekutanga-up, pakarepo ruzha, yakaderera chiutsi chisi, uye chengetedzo. , Iyo jenareta seti inodikanwa kuti ive ne AMF basa uye kuve neATS kuona kuti kana magetsi makuru abviswa muchipatara, jenareta seti inofanira kupa magetsi nekukasira. Yakashongedzerwa neRS232 kana RS485 / 422 yekutaurirana interface, inogona kuve yakabatana necomputer yekutarisa kure, uye matatu maremote (kurema kuyera, kure chiratidzo uye kure kure) zvinogona kuitika, kuti zvive zvizere otomatiki uye zvisina kuchengetedzwa.
1. Ruzha runoshanda
Shandisa Ultra-yakaderera ruzha zvikamu kana macomputer emakamuri ekudzora ruzha mapurojekiti kuona kuti vashandi vekurapa vanogona kutumira nerunyararo rwepfungwa nenzvimbo yakakwana yakanyarara, uye panguva imwechete kuona kuti varwere vanogona kuve nerunyararo kurapwa nharaunda.
2. Main uye anokosha ekuchengetedza michina
Kana pakaitika mhosho, jenareta yedhiziri inozomira yotumira zviratidzo zvinoenderana: yakaderera mafuta kumanikidza, tembiricha yemvura yakakwira, kumhanyisa, kusatangisa kutanga, nezvimwe;
3. Kugadzikana kuita uye kuvimbika kwakasimba
Injini dzedhiziri dzinounzwa kunze, majoini akabatana kana anozivikanwa epamba zvigadzirwa: Cummins, Perkins, Volvo, Yuchai, Shangchai Power, nezvimwewo maJenareta haana brushless ese-emhangura zvachose magineti otomatiki emagetsi-anotonga majenareta ane yakakwira kuburitsa kugona uye avhareji dhiziri jenareta seti Iyo nguva pakati pekukundikana haisi pasi pe2000 maawa;